मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनपछिको प्रश्न, 'पूर्व रक्षामन्त्री पोखरेलको शक्ति खुम्चियो कि तन्कियो ?'
काठमाडौं । बुधबार साँझ मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका हुन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य एवं महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् भने सहरी विकास मन्त्रीमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीमा लिलानाथ श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । यसअघि महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री रहेका पार्वत गुरुङ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा सरुवा भएका छन् । नवनियक्त अर्थमन्त्री पौडेल, सहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको सपथ समेत खाएका छन् ।बिहीबार बिहान साढे ११ बजे राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा आयोजित सपथ ग्रहण कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई सपथ खुवाएकी हुन् । सपथ खाएपछि नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आजै पदभार सम्हालेका छन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई रक्षा मन्त्रीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानेका छन् । रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओली आफैँले राखेका छन् । अन्य मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरु भने यथावत नै रहेका छन् ।जसमध्ये रामबहादुर थापा गृह, प्रदीपकुमार ज्ञवाली परराष्ट्र, हृदयेश त्रिपाठी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, वर्षमान पुन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, घनश्याम भुसाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास, भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, लेखराज भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, योगेशकुमार भट्टराई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शक्तिबहादुर बस्नेत वन तथा वातावरण, रामेश्वर राय यादव श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, जगतबहादुर विश्वकर्मा युवा तथा खेलकुद, पद्माकुमारी अर्याल भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, बीना मगर खानेपानी, वसन्तकुमार नेम्बाङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, मोतीलाल दुगड उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री, नवराज रावत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री र रामवीर मानन्धर सहरी विकास राज्यमन्त्री रहेका छन् ।रक्षामन्त्री पोखरेलको शक्ति खुम्चियो कि तन्कियो ? रक्षा मन्त्रीबाट पोखरेललाई हटाइएसँगै उनको शक्ति खुम्चियो वा तन्कियो भन्ने यतिबेला प्रश्न उठेको छ । प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक नै छ । पहिले महासचिवको रूपमा पोखरेललाई पछि पारियो अहिले मन्त्रालय विहिन बनाइयो । प्रधानमन्त्री निकट स्रोत भने रक्षा मन्त्री मात्र रहेका पोखरेललाई बढुवा गरी प्रधानमन्त्रीपछिको वरियतामा राखिएको दाबी गर्छ । साथै रक्षा मन्त्री पोखरेलको इच्छाकै कारण सबै मन्त्रालय हेर्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा तानिएको उनीहरुको दाबी छ ।किन हटाइयो रक्षा मन्त्रीबाट पोखरेललाई ? उपप्रधानमन्त्रीबाट ईश्वर पोखरेल बाहिरिनुको एउटा कारण नेपाली सेनासँगको टकराब पनि हो । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आगामी साता सेनाका आठ वटै पृतनापतिको ‘ब्रिफिङ’ लिने तयारी गरेका थिए तर उनी रक्षामन्त्रीको पदबाटै बाहिरिएका छन्  । अब पृतनापतिहरूले सीधै प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्नेछन् । पहिलो पटक ०७४ फागुनमा सरकार गठन हुँदा पोखरेलको दाबी अर्थ मन्त्रालयमा थियो । तर, ओली उनलाई मन्त्री समेत बनाउने पक्षमा थिएनन्  । तर सचिवालय सदस्य समेत भएकाले ईश्वर पोखरेललाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश नगर्दा उनको पनि साथ छुट्ने भय ओलीमा थियो । त्यसैले रक्षा मन्त्री नियुक्त गरेर पोखरेललाई समावेश गरेका थिए ।प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्री पद पनि दिएका थिएनन् । तर पछि समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याउन उपप्रधानमन्त्री दिनुपर्ने भएकाले पोखरेलले पनि त्यही मौकामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आग्रहमा उपप्रधानमन्त्री पाएका थिए । क्याविनेटमा दोस्रो वरियतामा रहेका पोखरेललेको कार्यशैलीलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली जसरी पनि हटाउने पक्षमा भएको बालुवाटार निकट स्रोतको दाबी छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीले पोखरेललाई मन्त्रिपरिषदबाटै नहटाउन सन्देश दिएपनि क्वाविनेटबाट नहटाइएपनि साइजमा ल्याइएको हो ।कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समितिको संयोजक भएपछि उनको कमजोर व्यवस्थापनका कारण उनी दिनप्रतिदिन अलोकप्रिय बन्दै गएका थिए  । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो । कोभिड नियन्त्रणका लागि पहिलो पटक स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयभन्दा बढी भूमिका पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले पाएको थियो । २५ माघमा खुलेको टेन्डर अलपत्र पारेर १४ चैतमा रातारात ओम्नीलाई एक अर्ब २४ करोडको ठेक्का दिएको भनेर उनको चर्को आलोचना गरिएको थियो ।ओम्नीको ठेक्का रद्द गरेपछि प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनु पर्नेमा सरकारले १६ चैतमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर सेनालाई जिम्मेवारी दिएको थियो । ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेपछि कुल दुई अर्ब ६५ करोडको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ८५ प्रतिशत (दुई अर्ब २५ करोड) को जिम्मा सेनाले र १५ प्रतिशत (४० करोड २२ लाख) को जिम्मा स्वास्थ्य सेवा विभागले लिएका थिए । सँगै प्रक्रिया सुरु गरेको विभागले १५ रुपैयाँका दरले ल्याएका सर्जिकल मास्कलाई सेनाले ५२ रुपैयाँ ५२ पैसा तिरेको थियो । जसका कारण देशलाई ठूलो क्षति भएको थियो ।त्यस्तै फास्ट ट्याकको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटमा पोखरेल र सेनाको मत बाझिएको थियो । पोखरेलको रोजाइ स्मेक कम्पनीलाई कन्सल्ट्यान्ट छनोट गर्ने थियो, तर प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कोरियन युसिन कम्पनीलाई छनोट गर्न चाहेपछि प्रधानसेनापति र पोखरेल बीच विवाद भएको थियो । सेनाको काम गर्ने शैलीको रक्षा मन्त्रीले आलोचना समेत गरेका थिए । गत साउन १६ मा रक्षामन्त्री पोखरेलले सैनिक नेतृत्वको आलोचना गर्दै लकिरको फकिरको उदाहरण दिएका थिए ।ईश्वर पोखरेललका सम्धी प्रा.डा. उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाउने कसरतमा मन्त्री पोखरेल विवादमा मुछिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले कोइरालालाई बैंकको अध्यक्ष बनाउने गरी ८ भदौमा वाणिज्य बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त भएका थिए । कोइरालालाई पोखरेलकै दबाबमा वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाउने गरी सञ्चालकमा नियुक्ति गरिएको थियो । तर, कोइरालालाई अध्यक्ष बनाउने विषयमा विवादपछि १० भदौमा बैंकको बोर्ड बैठकसमेत प्रभावित भएको थियो ।महासचिव पौडेलको फलिफाप प्रधानमन्त्री ओलीको निकट भएकै आधारमा पटक पटक मन्त्रीमा नियुक्ति पाएको नेकपाकै नेता तथा कार्यकर्ताको आरोप छ । नेकपाको महासचिव जस्तो महत्वपूर्ण पदका साथै अर्थमन्त्री पौडेल पाँच पटक मन्त्री बनेका छन् । ०५३ सालमा युवा, खेलकुद तथा संस्कृति, ०६५ मा जलस्रोत मन्त्री, ०६७ सालमा रक्षा मन्त्री र ०७२ सालमा अर्थमन्त्री भएका थिए  भने अहिले फेरि अर्थमन्त्री मै नियुक्त भएका छन् ।मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र विस्तारको श्रृङखला प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म १० औँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुर्नगठन गरेका छन् । ०७४ फागुन ३, १४ र चैत १२ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको थियो । त्यसपछि ०७५ जेठ १८, साउन १८ र फागुन १६ मा विस्तार गरिएको थियो । पछि ०७६ साउन १५, मंसिर ४ र फागुन ५ मा विस्तार तथा पुर्नगठन गरिएको थियो । साथै प्रधानमन्त्रीले ०७६ मंसिर ४ मा मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनमा ६ मन्त्री, ३ राज्यमन्त्री हटाएर नयाँ ६ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री नै नियुक्त गरेका थिए । त्यस्तै ०७७ असोज २८ गते तीन मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिएको छ ।
२९ आश्विन २०७७, बिहीबार १४:१३
काठमाडौं । बुधबार साँझ मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका हुन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य एवं महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् भने सहरी विकास मन्त्रीमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीमा लिलानाथ श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । यसअघि महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री रहेका पार्वत गुरुङ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा सरुवा भएका छन् । नवनियक्त अर्थमन्त्री पौडेल, सहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको सपथ समेत खाएका छन् ।
बिहीबार बिहान साढे ११ बजे राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा आयोजित सपथ ग्रहण कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई सपथ खुवाएकी हुन् । सपथ खाएपछि नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आजै पदभार सम्हालेका छन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई रक्षा मन्त्रीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानेका छन् । रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओली आफैँले राखेका छन् । अन्य मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरु भने यथावत नै रहेका छन् ।
जसमध्ये रामबहादुर थापा गृह, प्रदीपकुमार ज्ञवाली परराष्ट्र, हृदयेश त्रिपाठी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, वर्षमान पुन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, घनश्याम भुसाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास, भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, लेखराज भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, योगेशकुमार भट्टराई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शक्तिबहादुर बस्नेत वन तथा वातावरण, रामेश्वर राय यादव श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, जगतबहादुर विश्वकर्मा युवा तथा खेलकुद, पद्माकुमारी अर्याल भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, बीना मगर खानेपानी, वसन्तकुमार नेम्बाङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, मोतीलाल दुगड उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री, नवराज रावत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री र रामवीर मानन्धर सहरी विकास राज्यमन्त्री रहेका छन् ।
रक्षामन्त्री पोखरेलको शक्ति खुम्चियो कि तन्कियो ?
रक्षा मन्त्रीबाट पोखरेललाई हटाइएसँगै उनको शक्ति खुम्चियो वा तन्कियो भन्ने यतिबेला प्रश्न उठेको छ । प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक नै छ । पहिले महासचिवको रूपमा पोखरेललाई पछि पारियो अहिले मन्त्रालय विहिन बनाइयो । प्रधानमन्त्री निकट स्रोत भने रक्षा मन्त्री मात्र रहेका पोखरेललाई बढुवा गरी प्रधानमन्त्रीपछिको वरियतामा राखिएको दाबी गर्छ । साथै रक्षा मन्त्री पोखरेलको इच्छाकै कारण सबै मन्त्रालय हेर्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा तानिएको उनीहरुको दाबी छ ।
किन हटाइयो रक्षा मन्त्रीबाट पोखरेललाई ?
उपप्रधानमन्त्रीबाट ईश्वर पोखरेल बाहिरिनुको एउटा कारण नेपाली सेनासँगको टकराब पनि हो । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आगामी साता सेनाका आठ वटै पृतनापतिको ‘ब्रिफिङ’ लिने तयारी गरेका थिए तर उनी रक्षामन्त्रीको पदबाटै बाहिरिएका छन्  । अब पृतनापतिहरूले सीधै प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्नेछन् । पहिलो पटक ०७४ फागुनमा सरकार गठन हुँदा पोखरेलको दाबी अर्थ मन्त्रालयमा थियो । तर, ओली उनलाई मन्त्री समेत बनाउने पक्षमा थिएनन्  । तर सचिवालय सदस्य समेत भएकाले ईश्वर पोखरेललाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश नगर्दा उनको पनि साथ छुट्ने भय ओलीमा थियो । त्यसैले रक्षा मन्त्री नियुक्त गरेर पोखरेललाई समावेश गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्री पद पनि दिएका थिएनन् । तर पछि समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याउन उपप्रधानमन्त्री दिनुपर्ने भएकाले पोखरेलले पनि त्यही मौकामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आग्रहमा उपप्रधानमन्त्री पाएका थिए । क्याविनेटमा दोस्रो वरियतामा रहेका पोखरेललेको कार्यशैलीलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली जसरी पनि हटाउने पक्षमा भएको बालुवाटार निकट स्रोतको दाबी छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीले पोखरेललाई मन्त्रिपरिषदबाटै नहटाउन सन्देश दिएपनि क्वाविनेटबाट नहटाइएपनि साइजमा ल्याइएको हो ।
कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समितिको संयोजक भएपछि उनको कमजोर व्यवस्थापनका कारण उनी दिनप्रतिदिन अलोकप्रिय बन्दै गएका थिए  । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो । कोभिड नियन्त्रणका लागि पहिलो पटक स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयभन्दा बढी भूमिका पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले पाएको थियो । २५ माघमा खुलेको टेन्डर अलपत्र पारेर १४ चैतमा रातारात ओम्नीलाई एक अर्ब २४ करोडको ठेक्का दिएको भनेर उनको चर्को आलोचना गरिएको थियो ।
ओम्नीको ठेक्का रद्द गरेपछि प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनु पर्नेमा सरकारले १६ चैतमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर सेनालाई जिम्मेवारी दिएको थियो । ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेपछि कुल दुई अर्ब ६५ करोडको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ८५ प्रतिशत (दुई अर्ब २५ करोड) को जिम्मा सेनाले र १५ प्रतिशत (४० करोड २२ लाख) को जिम्मा स्वास्थ्य सेवा विभागले लिएका थिए । सँगै प्रक्रिया सुरु गरेको विभागले १५ रुपैयाँका दरले ल्याएका सर्जिकल मास्कलाई सेनाले ५२ रुपैयाँ ५२ पैसा तिरेको थियो । जसका कारण देशलाई ठूलो क्षति भएको थियो ।
त्यस्तै फास्ट ट्याकको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटमा पोखरेल र सेनाको मत बाझिएको थियो । पोखरेलको रोजाइ स्मेक कम्पनीलाई कन्सल्ट्यान्ट छनोट गर्ने थियो, तर प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कोरियन युसिन कम्पनीलाई छनोट गर्न चाहेपछि प्रधानसेनापति र पोखरेल बीच विवाद भएको थियो । सेनाको काम गर्ने शैलीको रक्षा मन्त्रीले आलोचना समेत गरेका थिए । गत साउन १६ मा रक्षामन्त्री पोखरेलले सैनिक नेतृत्वको आलोचना गर्दै लकिरको फकिरको उदाहरण दिएका थिए ।
ईश्वर पोखरेललका सम्धी प्रा.डा. उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाउने कसरतमा मन्त्री पोखरेल विवादमा मुछिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले कोइरालालाई बैंकको अध्यक्ष बनाउने गरी ८ भदौमा वाणिज्य बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त भएका थिए । कोइरालालाई पोखरेलकै दबाबमा वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाउने गरी सञ्चालकमा नियुक्ति गरिएको थियो । तर, कोइरालालाई अध्यक्ष बनाउने विषयमा विवादपछि १० भदौमा बैंकको बोर्ड बैठकसमेत प्रभावित भएको थियो ।
महासचिव पौडेलको फलिफाप
प्रधानमन्त्री ओलीको निकट भएकै आधारमा पटक पटक मन्त्रीमा नियुक्ति पाएको नेकपाकै नेता तथा कार्यकर्ताको आरोप छ । नेकपाको महासचिव जस्तो महत्वपूर्ण पदका साथै अर्थमन्त्री पौडेल पाँच पटक मन्त्री बनेका छन् । ०५३ सालमा युवा, खेलकुद तथा संस्कृति, ०६५ मा जलस्रोत मन्त्री, ०६७ सालमा रक्षा मन्त्री र ०७२ सालमा अर्थमन्त्री भएका थिए  भने अहिले फेरि अर्थमन्त्री मै नियुक्त भएका छन् ।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र विस्तारको श्रृङखला
प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म १० औँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुर्नगठन गरेका छन् । ०७४ फागुन ३, १४ र चैत १२ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको थियो । त्यसपछि ०७५ जेठ १८, साउन १८ र फागुन १६ मा विस्तार गरिएको थियो । पछि ०७६ साउन १५, मंसिर ४ र फागुन ५ मा विस्तार तथा पुर्नगठन गरिएको थियो । साथै प्रधानमन्त्रीले ०७६ मंसिर ४ मा मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनमा ६ मन्त्री, ३ राज्यमन्त्री हटाएर नयाँ ६ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री नै नियुक्त गरेका थिए । त्यस्तै ०७७ असोज २८ गते तीन मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिएको छ ।
पूर्व रक्षामन्त्री पोखरेल, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन :
Prevनेपाली चियाले व्यापार चिह्न त पायो, कार्यान्वयनमा समस्या
सेञ्चुरी रेमिट युएईको दशैं तिहार योजना सार्वजनिकNext
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, विष्णु पौडेल बने नयाँ अर्थमन्त्री
नेकपाका दुई अध्यक्ष बीच छलफल, दशैंपछि मात्र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने सम्भावना